कहिले हुन्छ त यो आइडल जोडीको बच्चा ? - NepalKhoj
कहिले हुन्छ त यो आइडल जोडीको बच्चा ?
नेपालखोज २०७६ असोज २४ गते १३:२४
काठमाडाैं । नायक रणवीर सिं‌ह र नायिका दीपिका पादुकोणको जोडीलाई बलिउडको सुन्दर जोडीका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । धेरैले उनीहरुलाई आइडल जोडीका रुपमा लिने गर्छन् । उनीहरुको प्रेम साच्चिकै गज्जब छ ।
लामो समयको प्रेमपछि उनीहरुले बिबाह गरिसकेका छन् । त्यसैले होला, धेरैको चासो उनीहरुको बच्चामा छ । हालै एक अन्तरवार्तामा नायिका दीपिकालाई बच्चाको विषयमा प्रश्न गरिएको छ । उक्त प्रश्नमा दीपिकाले अहिले नै कुनै योजना नभएको उत्तर दिएकी छिन् ।